Fantatrao ve: Filan-kevim-pilaminan'ny Firenena mikambana
dimanche, 03 mars 2019 18:45
Sampana mpanatanteraka eo anivon'ny Firenena mikambana izy ity, izay manana andraikitra eo amin'ny fampandrian-tany sy ny fandriam-pahalemana manerantany.
Manana fahefana izy ity amin'izay fampandriana fahalemana izay, fanomezana sazy iraisam-pirenena, eny hatramin'ny fanapahan-kevitra amin'ny fampiasana hery ara-tafika, izay andraisan'ireo mpikambana anjara.
Manan-kery tsy hay tohaina eo anivon'ny Firenena rehetra mpikambana ao amin'ny Firenena mikambana ny fanapahan-kevitra raisin'ity Filankevim-pilaminana ity (résolutions).
Misy firenena 15 no mpikambana ao anatiny, ka ny 5 amin'ireo dia mpikambana maharitra, ary ny 10 ambiny kosa dia fidiana, izay miova isaky ny roa taona ny atsasany.
Iretsy dimy voalohany tsy miova, dia Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie, ary manana fahefana tsy azo ivalozana, ka raha mitsivalana ny iray amin'izy ireo dia efa tsy lany ny volavolam-panampahan-kevitra tiana ho raisina.
Mpikambana 9 amin'ireo 15 no manaiky ny fanapahan-kevitra na résolutions, raha tsy nisy nitsivalana iretsy 5 maharitra, dia lany ny fanapahan-kevitra.
Azo antsoina na andro na alina ireo mpikambana 5 ireo, raha misy ny ilana izany.
Amin'izao dia i Frantsa no lehiben'io Filan-kevim-pilaminan'ny Firenena mikambana, ary ireto ny mpikambana ao:
Ao New York (Etats-Unis) ny foiben-toerany.
Anisan'ny fanapahan-kevitra noraisin'ity Filan-kevim-pilaminana ity ny fandefasana miaramila misatroka manga 10 000 sy polisy 1 800 tany République centrafricaine (RCA) ny 10 aprily 2014 hanakanana ny adim-poko tany an-toerana.
(Sary nindramina - Efitra fivorian'ny Filan-kevim-pilaminan'ny Firenena mikambana - Miaramila misatroka manga)